Soomaaliya, 02 March 2018
Khamiis 2 March 2018
DFS: Heshiiska Dekadda Ber-bera waa Sharci Darro
Reysal wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali kheyre, oo maanta ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo Itoobiya ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Faaqidaadda Toddobaadka: Muranka Canshuurta
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxa uu toddobaadkan Barnaamijka ku saabsan yahay muranka canshuurta ee ka dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada gobolka Banaadir.
Qarax Khasaaro Sababay oo Ka Dhacay Afgooye
Khasaaro xoog leh ayaa la sheegay inuu ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu weeraray saldhig ay ciidamada dowlada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Shabaab oo Dagaal ku Qabsaday Balcad
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan ururka al-Shabab ay saakay qabsadeen degmada Balcad, kadib marki ay ku qaadeen weerar gaadma ah.
Kenya: Shabaab oo Weerartay Xarrun Ciidan
Dhowr askarta booliiska Kenya ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar habeenkii xalay ka dhacay degaanka Fino, sidaasi waxaa idaacadda VOA Somali u sheegay dad degaanka ah.
Somaliland, DP World Iyo Itoobiya oo Heshiis ka Gaarey Dekadda Berbara
Heshiis saddex geesood ah oo dhex maray maamulka Somaliland, shirkadda DP World iyo Itoobiya, ayaa maanta lagu saxiixay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta.
Boosaaso: Goobaha Lagu Dhaqdo Geela oo Soo Badanaya
Muddooyinkan danbe, waxa ku soo kordhayay deegaannada Puntland goobaha lagu dhaqo xoolaha, gaar ahaan geela, kuwaasi oo caanahooda loo iib geeyo magaalooyinka.
Wareysi: Wasiirka Kheyraadka Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtey in xaalad adag oo biyo yari ahi ay ka jirto magaalooyinka qaarkood iyo dhulka baaddiyaha ah, ayna ku talo jirto mustaqbalka dhow in dadka qaarkood loo sameeyo biyo dhaamin iyo ceelal qodis si looga hortago dhibaato ka dhalan karto biyo la’aan.
Qarax Ka Dhacay Duleedka Muqdisho oo Dhimasho Sababay
Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena wey ku dhaawacantay qarax gaari oo maanta ka dhacay kantoroolka Siinka Dheer ee isku xira Muqdisho iyo Afgooye.
Biyo Yaraan ka Jirta Kulbiyow
Deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubadda Hoose, ayaa laga soo sheegaya biyo la'aan saameysay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaankaasi.
Shabaab oo Gubey Raashiin Loo Wadey Waajid
Maleeshyada ururka al-Shabab ayaa la sheegay inay ku dileen sagaal dameer meel ah u dhow magaalada Waajid ee gobolka Bakool maanta.